Mpamatsy sy orinasa mamy | Mpanamboatra zava-mamy any Sina
D-mannitol, karazana alikaola misy siramamy, dia fantatra koa amin'ny hoe d-mannitol.D- melitol; Manna melitol; D-mannitol; Acid; Sugareran pancongo mannose Piperan, sns.
Ny vovoka kristaly tsy misy loko na fotsy mitovy amin'ny sukrosa izay manandrana kely mamy.Sy fanafody, sakafo, sakafo, fikarohana ara-tsiansa fiainana dia manana andraikitra.
Sorbitol dia karazan-tsemboka vaovao vita amin'ny glucose voadio ho fitaovana amin'ny alàlan'ny fanadiovana hydrogénation, mifantoka .Rehefa nofonin'ny vatan'olombelona izy dia niely tsimoramora ary avy eo nanala ny oxydose ho fructose, ary nandray anjara tamin'ny metabolization fructose.
Ny siramamy Stevia dia siramamy voajanahary izay nalaina avy tamin'ny ravina stevia, manana fananana miavaka izy, toy ny mamy, kaloria ambany. Ny mamy amin'ny inulin dia 180-450 fotoana an'ny sukrosa. Ny valiny dia naneho fa ny siramamy stevia dia mpamatsy tsy cariogenezy. Stevia amin'ny maha-zava-mamy voajanahary ny hamam-bidy avo lenta dia ampiasana betsaka amin'ny sakafo, zava-pisotro, fanafody, paraky, kosmetika, liqueurs, savovo nify, zava-manitra, sira a ...
Sucralose dia siramamy aotra-calorie siramamy. Ao amin'ny Vondrona eropeana, fantatra ihany koa izy io ambanin'ny isa E (kaody fanampiny) E955. Ny sucralose dia manodidina ny in-600 mamy toy ny sukrosa (siramamy latabatra), mamy indroa noho ny saccharin, ary 3,3 heny mamy toy ny aspartam. Tsy toy ny aspartam, miorina amin'ny hafanana sy ny fatran'ny pH izy ary azo ampiasaina amin'ny fanaovan-tsakafo na amin'ny vokatra mitaky androm-piainana lava kokoa. Ny fahombiazan'ny varotra sucralose vokatra ste ...
Ny Trehalose, fantatra koa amin'ny hoe mycose na tremalose, dia disaccharide mifandraika amin'ny alfa voaforona fatoran'ny α, α-1,1-glucoside eo anelanelan'ny α-glucose glucose roa. Tamin'ny 1832, HAL Wiggers dia nahita trehalose tao anaty eraky ny roye, ary tamin'ny taona 1859 Marcellin Berthelot dia nanokana azy tamin'ny mana trehala, singa iray namboarin'ireo weevil, ary nantsoiny hoe trehalose. Izy io dia azo ampifangaroina amin'ny bakteria, holatra, zavamaniry ary biby invertebrate. Izy io dia voarohirohy amin'ny anhydrobiosis - ny fahafahan'ny zavamaniry sy ny biby mahazaka maharitra ...
Xylitol dia zava-manitra polyolol 5-carbon naturalolcurring. Hita amin'ny voankazo sy legioma izy io, ary ny vatan'olombelona mihitsy aza no mamokatra azy. Izy io dia afaka mifoka hafanana rehefa levona anaty rano, miaraka amin'ny fiasan'ny hamandoana, ary ny fivalanana mandalo dia azo alaina rehefa alaina be loatra. Ny vokatra koa dia afaka mitsabo ny fitohanana. Xylitol no mamy indrindra amin'ny polyol rehetra. Mamy toy ny sukrosa izy, tsy misy tsirony aorian'izay ary azo antoka ho an'ny diabeta. Xylitol dia manana kaloria 40% kely kokoa noho ny siramamy ary, noho izany ...
Mpamamy 100 ~ 150 Mesh Aspartame
Sweeteners 20 ~ 60 Mesh Aspartame
Sweeteners 60 ~ 100 Mesh Aspartame
Vovon-tsakafo mamy, Aspartame 200 Mesh
sanda entana CAS No. 585-88-6 Anarana hafa Maltitol MF C12H24O11 EINECS No. 209-567-0 FEMA No. 3025 Toerana niavian'ny Sinoa Karazan-tsakafo Sweet Brand Brand Z & FSUNGOLD Model Number Food grade Item Maltitol Powder / Solution / Syrup / Liquid S intersener Supply Product name Maltitol Appearance White Powder Certification ISO Grade Food Garde Application Food Additive Colour White Shelf Life 2 Years Usage Sweeteners Solid Content 98.0% Min (1) Amin'ny maha sakafo azo ampiasaina, dia ...
Ny glucose amin'ny kristaly, araka ny fahasamihafan'ny fizotry ny famokarana dia azo zaraina ho Dextrose Monohidrat sy Dextrose Anhydrous. Ny monohidratran'ny dextrose kristaly dia mizara glucose, glucose ary glucose amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny sehatry ny sakafo sy ny indostrian'ny legioma. Amin'ny alàlan'ny hydrogenation ny glucose monohidraty dia afaka mamokatra sorbitol, fanafody ary glucose monohidraty ho fanafody am-bava indrindra (auxiliary). Miroxidose dextrose kristaly cont ...
CAS No. .: 149-32-6 fenitra arakaraka ny: GB26404-2011 / USP32 / EP 7.0 / FCCIV haben'ny harato: 14-30, 30-60, 18-60, 100mesh Erythritol, polyol (alikaola siramamy), dia zava-mamy legioma manandrana tsara izay mety amin'ny sakafo isan-karazany mihena amin'ny kaloria sy tsy misy siramamy. Io dia ampahany amin'ny sakafon'olombelona nandritra ny an'arivony taona maro noho ny fisian'izany amin'ny voankazo sy sakafo hafa. Erythritol dia manana fandeferana mandevon-kanina avo lenta, azo antoka ho an'ny olona voan'ny diabeta, ary tsy mampirongatra ny lo nify. Mitroka hafanana tena tsara ...
1. Fitsaboana rano Dextrosewaste indostrialy. 2.Dextroseis ampiasaina indrindra ho sakafo maha-tsindrona (tsindrona glucose); 3.Dextrose amin'ny indostrian'ny sakafo: ampiharina betsaka amin'ny indostrian'ny siramamy ankehitriny. Dextrose dia sakafo mahavelona ilaina amin'ny metabolisma ao amin'ny vatana. 4. indostrian'ny fanafody dia azo ampiasaina mivantana amin'ny indostrian'ny fanontana sy ny fandokoana ho toy ny mpandraharaha mampihena, ao amin'ny indostrian'ny fitaratra sy ny tavin-drano plastika rano mafana izay ampiasaina matetika ho toy ny mpandraharaha mampihena. Analysis conten ...